Patchwork: mishiinnada harqaanka ugu fiican iyo waxa aad u baahan tahay inaad barato
Waa maxay Patchwork?
Qeexid iyo asal ahaan
Si loo sameeyo qeexitaan qumman ee Patchwork, waa inaan dib u milicsannaa dhowr sano. Bilawgeedii, waxay ku salaysnayd ku biir qaybo ka mid ah maro, si aad mid qudha u samaysid. Farsamadan waxa kale oo loo isticmaalay in lagu sameeyo dhejisyo gaar ah oo dharka ah, sida balastar, iyo in la sii wado isticmaalkooda. In kasta oo tani ay ahayd bilawgeedii, haddana waa run in wax yar, ujeeddada farsamada la dhammaystiray. Si aad u badan oo ku bilowday balastar ahaan waxay noqotay mid ka mid ah farsamooyinka qurxinta ee weyn.
Erayga Patchwork waa midowga laba kelmadood oo asalkoodu Ingiriisi yahay: Patch+Work (sharaf iyo shaqo). Sida hubaal ah, waa farsamada dharka, ama qaabka tolida, kaas oo mideeya noocyada kala duwan ee dharka iyo midabyo kala duwan.
Runtu waxay tahay inaadan ku dhejin karin taariikhda dhalashada Patchwork. Tani waa farsamo duug ah runtii.. Si aad u badan ayaa mid iyaga ka mid ah laga helay Masar, qabrigii boqoradda, sannadkii 980 BC. Sidoo kale qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee BC, waxaa la helay koore leh dhammaystiran. Intii aan ku jiray I ac waxay ahayd roogag ka kooban dhamaystir qaabaysan iyo sidoo kale tolid.
In yar ayaa farsamadan laga isticmaali jiray meelo kala duwan oo adduunka ah. Waqooyiga Afrika, Suuriya ama Hindiya waxay ahaayeen qaar ka mid ah hormuudka. Ilaa laga soo gaadhay Yurub, in yar ka dib kuwii aan soo sheegnay, qiyaastii qarnigii XNUMXaad. Markii ay bilowday inay ka shaqeyso Yurub waxay lahayd ujeedo cad oo cad: qurxinta.
Inkasta oo codsiyada quilting horayba loo isticmaalay Yurub, waxay u muuqataa in imaatinka Patchwork uu qaatay isbeddel weyn, sababtoo ah qof kastaa wuxuu ku riyaaqay quruxdiisa weyn. Ma ahayn oo kaliya ku habboon gogosha, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay cajaladaha qaarkood iyo sidoo kale calanka. Qarnigii XNUMX-aad waxaa dalka Talyaaniga laga sameeyay dhar-xidho kala duwan. Waxa la odhan jiray 'trapunto quilted'. Ma aha mid kale oo aan ahayn laba lakab oo dhar ah oo sawirro lagu sameeyay qaabka cirifka. Muhiimadda suufka waa in la xuso, maadaama loo isticmaalay nooc ka mid ah ilaalinta. Askartu waxay u yimaadeen inay is-difaacaan iyaga oo ku mahadsan.
Maanta Waa mid ka mid ah farsamooyinka aadka loo isticmaalo marka gogosha la samaynayo.. Labada gogol iyo sariiro. In kasta oo aan sidoo kale ognahay in aysan halkaas ku joogsan. Male-awaalka iyo kheyraadka ayaa naga dhigay sidoo kale inaan aragno bacaha noocaan ah, barkimada iyo dharka moodada. Sababtoo ah labadaba Patchwork iyo quilting labaduba waa farsamooyin isku dhow, kuwaas oo wada socon kara.
Maxaad u baahan tahay inaad ku sameyso Patchwork guriga?
Mararka qaarkood waxaan u maleyneynaa inay adkaan karto in lagu bilaabo farsamadan. Ma jiraan wax runta ka fogaan kara. Maaddaama marka lagu daro inaad u ogolaato inaad naftaada ku kaxayso male-awaalkaaga, waxaad samayn kartaa boorsooyinkaaga iyo sidoo kale suunka, iwm. Xasuusnoow in laga sameeyay haraaga yaryar ama qaybo dhar ah, had iyo jeer waa hab ku habboon oo dib loo warshadayn karo. Ma rabtaa inaad ogaato waxaad u baahan tahay si aad u bilowdo?:
Saldhig ama goynta: waa dusha kaa diidaya in aad xoqdo miiskaaga. Maxaa lagu qeexi karaa difaac ahaan, kaas oo sidoo kale ka kooban cabbirro inch iyo sentimitir labadaba. Dabcan, had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa midka aad doorato.
gooyaha dharka: Inkasta oo aad u maleyneyso in maqasyadu ay yihiin aasaasi, kiiskan maaha mid aad u badan. Way fiicantahay in la doorto gooyn nadiif ah oo sax ah oo gooyayaashu naga tagi doonaan. Dabcan, waxay gaar u yihiin shaqadan. Waxay leeyihiin qayb wareeg ah oo wareeg ah oo dhex mari doonta dharka, ka hortagaya inay jajabaan.
Xeer: Shaki la'aan, curiye aasaasi ah marka ay timaaddo goynta dharka. Isku day inaad ka dhigto mid ballaaran oo adag si ay u sii jiraan waqti dheer.
Mashiinka tolo: Si aad u awooddo in aad qabato shaqada nadiifinta iyo dhamaystirka wanaagsan, mashiinka tolida ayaa ah xulafada ugu fiican. Wax yar ka sii hooseeya waxaad heli doontaa xulashada moodooyinka ugu fiican ee mashiinnada tolida ee patchwork iyo dhogorta.
Griddle: Birtu waxay sidoo kale hubisaa dhamaystir fiican. Tol kasta oo aad samayso waxa ay u baahan doontaa kaawiye.
dharka la doortay: Had iyo jeer way fiican tahay in la hubiyo in la doorto dhar wanaagsan si shaqadeenu ay sidoo kale u keento natiijo wanaagsan. Xaaladdan oo kale, dhar tayo leh ayaa lagama maarmaan ah. Labada xariir iyo linenka ama dhogorta iyo flannel labaduba waa qumman yihiin, iyo sidoo kale 100% cudbi.
Irbadaha, biinanka iyo suunka: Marka aan hayno shaqada tolida ee indhaha, waa lagama maarmaan.
Warqad iyo qalin: Waxaan u baahan doonaa warqadda si aan u samayno qaababka. Qalintu waxay noqon kartaa madow iyo caddaan.
cabirka cajaladda iyo dunta: Waxaan isticmaaleynaa dun cudbi ah. Labada midab ee beige iyo kuwa madow ama caddaanka ah ee aasaasiga ah, maadaama ay yihiin codadka ugu baahida badan.
Mashiinnada tolida ugu fiican ee patchwork
Mashiinnada Qaababka Qiimaha
-100 barnaamijyo tolmo ah
-6 badhamada hal tilaabo oo toos ah 269,99 €
-6 godad badhan hal tallaabo 340,00 €
-7 badhamada hal tilaabo oo toos ah 299,99 €
Alpha Zart 01
- Hal tallaabo oo batoon ah oo toos ah 526,00 €
Eeg bixintaXusuusin: 7 / 10
-7 godad badhan oo hal tallaabo ah 349,99 €
Mashiinkan tolida ayaa cabbirkiisu yahay 46 cm dheer, 27 cm ballac ah iyo 37 sare. Waxay leedahay wadar ahaan 100 tol, kuwaas oo ku saabsan 76 ay yihiin qurxinta, 9 aasaasiga ah iyo 8 dabacsan.
threaderkeedu waa si toos ah, sidoo kale xulashada tolmada. Isagoo ka hadlaya iyaga, waa in la sheegaa in ay gaari karaan 6,5 mm ballac ah. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay nalka LED iyo badhanka dambe.
Xaaladdan oo kale waxaan ka helnaa mashiinka Heesaha kale. Waxay leedahay 98 nooc oo tolid ah, kuwaas oo 15 ka mid ah ay noqon doonaan dhar-xidhka, 8 loogu talagalay dharka laastikada iyo 61 qurxinta. Waxay kaloo leedahay 13 boos oo irbado ah.
Ballaca tolku wuxuu gaari karaa 7 mm. Cabbirkiisu waa 34cmx44cmx35. Waa mashiinka elektaroonigga ah, kaas oo aad ku heli doonto natiijooyin xirfadeed farsamada Patchwork.
Ma iloobin shaqadeeda irbad laba jibaaran iyo sidoo kale, maryo dhumuc weyn waxaad u bedeli kartaa inta u dhaxaysa laba cagood oo cadaadis ah.
Nooc cusub oo ah mashiinka dharka elektarooniga ah. Waxaa loogu talagalay Patchwork iyo quilting, taas oo aad ku gaari doonto natiijo xirfadeed. Waxaad isticmaali kartaa haddii aad fikrado ku leedahay iyo haddii kale adduunka tolidda.
Walaal CX70PE (Patchwork...
Uma baahnid baalle si aad u isticmaasho. Waxa ku jira 7 qaab botonhole, dunta auto, iftiinka LED iyo badhanka gadaale. Dhererka tolku wuxuu gaari karaa 5mm, halka ballaca uu la mid yahay 7mm. Xawaarkiisu waa 850 tol daqiiqadii. Iyada oo leh 6 eey quudin ah iyo dherer labanlaab ah oo lugta riixaya.
Marka lagu daro 404-tolmo iyo xusuusta leh, mashiinkani wuxuu kaloo leeyahay 18 tolmo oo Patchwork ah. Way fududahay oo raaxo leh in wax laga qabto. Ku fiican in aad qabato dhammaan hawlaha aad malaynayso. Waxay leedahay shaashadda LCD iyo cudud bilaash ah.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay 2 alifbeetada oo leh calaamado, dherer laba jibbaaran oo lugta riixaya, cirbadda tooska ah iyo xakamaynta xawaaraha tolida.
Mid kale oo ka mid ah mashiinnada korantada oo ku habboon labadaba quilting iyo Patchwork. Waa mid ka mid ah moodooyinka ugu dhameystiran in aad ka heli karto Dul toos ah, cudud bilaash ah iyo nidaam bilow oo awood leh.
Laakiin sidoo kale waa in ay leedahay 15 boos oo irbado ah iyo 197 tolmo oo kala duwan. Si loo abuuro qaabab kala duwan, waxay leedahay hawlaha xusuusta. Sidaa darteed, waxaan badbaadin karnaa abuurista ugu fiican.
Sida loo sameeyo Patchwork
Waa in la sheegaa inay jiraan dhowr farsamooyin oo aan diyaar u nahay inaan ku sameyno Patchwork. Wax yar ayaan arki doonaa kuwa ugu badan. Laakiin si aan u bilowno iyo istaroog ballaaran waa inaan raadinnaa qaybo maro ah, oo aan la shaqayn doonno. Ujeedadu waa in la wada gooyo si isku mid ah. Taasi waa, afar gees ama laba geesood, tusaale ahaan.
Markaad ka fikirto qaabka aad u bixin doonto iyo ka hor intaanad jarin, maskaxda ku hay inaad ka tagto nus sentimitir oo dheeraad ah dhinac kasta. waayo way na caawin doontaa tolo qaybaha marada. Marka talaabadan la sameeyo, waxaanu ku biiri doonaa qaybaha sida aan jecelnahay. Marka hore biinanka ka dibna, waxaan u toli doonaa si ay u helaan natiijada kama dambaysta ah ee la filayo.
Sida loo sameeyo Patchwork irbad la'aan
Kordhinta, farsamada Patchwork oo aan lahayn irbad ayaa noqonaysa midka ugu jecel. In ka badan wax kasta sababtoo ah fududayntiisa weyn. Waxaad ku dhaqmi kartaa marka nashqaduhu xoogaa la faahfaahiyo. Tusaale ahaan, in la sameeyo sawirada Patchwork. Farsamadan waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Patchwork Been', sababtoo ah Uma baahnid cirbadaha ama dunta.
Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa dhar midabbo kala duwan leh, kartoonno ama saldhig polystyrene ah. Marka lagu daro gooyo iyo xabag ama qori silikoon.
Farsamadu aad ayay u fudud tahay, sidii aynu hore u soo sheegnay. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad u wareejiso naqshadda la doortay ee dusha sare. Taas macnaheedu waa, kartoonada ama saldhigga polystyrene ee aad soo iibsatay. Kadibna, waxaad gooyn doontaa qaabka qaabaynta ama sawirka. Waxaan ku dhejin doonaa qaab kasta oo ka samaysan dharka oo gooyay, laakiin maskaxda ku hay in ay tahay in aan mar walba ka tagno dhowr milimitir sida margin.
Waxaan dhejin doonaa qaybaha dharka si aan u daboolno oo u buuxinno naqshadeena. Waxaan ku hagaajin doonaa xabagta waana taas.
Waa maxay dharka lagu dooranayo Patchwork oo aan lahayn cirbado?
Waa run in kiiskan, sidoo kale dharka suufka ah ayaa ku habboon. Laakiin waxaad sidoo kale dooran kartaa xariir. Inkasta oo kiiskan, waa inaad noqotaa mid aad u sax ah maadaama ay simbiriirixan tahay wax badan. Dharka dharka ah waxaad ku heli doontaa rinjiyeyntaada ama guud ahaan shaqooyinkaaga si aad u yeelato muuqaal xirfad leh. Haddii aadan wax badan ka aqoon farsamadan, ku dheji maryaha la sheegay. Laakiin haddii aad horeba u ahayd khabiir yar waxa kale oo aad ku shaqayn kartaa maryaha synthetic. Way ka yara adag yihiin, laakiin ma aha wax aan macquul ahayn.
Habka ugu fiican ee loo daboolo sariirtaada. Marka laga soo tago in ay leedahay dhaqan dheer, waxay keeni doontaa qaab shakhsi ah oo aad u qurux badan qol kasta. Dhinaca kale, kuwa leh sariir labajibbaaran ayaa had iyo jeer lagu dari doonaa midabada qolka.
ka hooska pastel iyo daabacaad ubaxeed Waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee la doortay si ay ugu daraan taabashada ugu diiran. Noocan ah xirmooyinka balastar ah Waxay sidoo kale ku dari doonaan qaab qurxin leh burush canab ah iyo retro. Dhanka kale, waxaan helnaa dharka carruurta, halkaas oo midabada iyo sawirada ugu xiisaha badan ay noqon doonaan jilayaasha qolalka yaryar.
Mid kale oo ka mid ah fikradaha ugu weyn ee farsamadani waa in la arko iyada oo ka muuqata boorsooyinka gacanta. Shaki la'aan, waxay sidoo kale noqon karaan kuwo hal abuur leh. Ka samaysan qaybo midab leh iyo qaabaysan oo dhar ah, waxay ku haboonaan doonaan daboolida nooc ka mid ah bacda kubado, ama boorso aad wax ka iibsanayso.
Waxaan u isticmaalnaa labadaba qolka fadhiga iyo qolalka hurdada. Ma aha oo kaliya shaqo gaar ah wakhtiga nasashada, laakiin sidoo kale sida faahfaahinta qurxinta. Sidaa darteed, farsamada Patchwork waxay sidoo kale naga caawineysaa inaan sidaas sameyno. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya buuxinta oo samee daboolka barkintaada. Waxaad isku dari kartaa midabada iyo sidoo kale qaababka oo waxaad ka dhigi kartaa cabbirro kala duwan. Gurigaaga kuwan ku qurxi barkimooyin balastar ah!.
Labada kursi, fadhiga fadhiga iyo kuraasta armaajada gaarka ah ayaa lagu qurxin karaa farsamadan. wax yar leh guridda iyo nordic waxyi, laba fikradood oo waaweyn ayaa isu yimaada si ay u qurxiyaan gudaha gudaha gurigeena. Sababtoo ah waxaad u qalantaa inaad nasato shaqada farshaxanka! Halkan waxaa ah macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo helo a balastar kursi.
Sida aan si fiican u ognahay, mahad qaababka patchwork waxaan la imaan karnaa fikrado aan dhamaad lahayn. Waxay yihiin aasaaska mid kasta oo iyaga ka mid ah, taas oo ah, sawirada nagu dhiirigelin doona inta lagu jiro habka. Laga soo bilaabo tirooyinka ilaa caruusadaha ama qalabyada iyo noocyo kala duwan oo iwm.
Mashiinka dharka » qoqobo